Teknụzụ ọhụụ maka mmepe eriri eriri arụ ọrụ - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Teknụzụ ọhụụ maka mmepe eriri eriri arụ ọrụ
Eriri arụ ọrụ ga-arụtụ aka ma e wezụga ihe anụ ahụ na akwarangwa nke eriri fiber n'ozuzu ya nwere, ka nwere eriri kemịkalụ nke otu ụdị ma ọ bụ ụdị ole na ole ọrụ pụrụ iche, chere maka arụmọrụ dịka hygroscopic, nchekwa ọkụ, antibacterial, antistatic. Ọrụ ọrụ nwere ike ọ bụghị naanị na-aza ma na-arụ ọrụ iji mezuo otu ihe achọrọ na ebumnuche, ma na-arụsi ọrụ ike ma na-echeta, nke a na-akpọ nzuzu nzu.
Enwere ike ekewa fiber eme ihe n'ime ụdị abụọ. Otu bụ eriri arụ arụ arụ arụmọrụ nke achọrọ na eriri ndị nke ot, na bụ, A na - enye ndị na - ahụkarị ọrụ ọhụrụ pụrụ iche na akwara ozi ma na-arụ ọrụ site na teknụzụ mgbanwe na anụ ahụ na kemịkalụ, dika ije, nchekwa eletrik, nchekwa nchekwa, nnyefe, nkewa, fotoelectric, biocompatibility, etc. Kinddị ọzọ bụ eriri arụmọrụ dị elu nke nwere ọrụ pụrụ iche, n'ozuzu ha na-ezo aka na njiri mara nke ike dị elu, elu modul, elu okpomọkụ na-eguzogide, kemịkalụ corrosion na ihe ndị ọzọ eji eme fiber, ya maka mmetụta anụ ahụ dị ka mgbakasị ahụ, okpomọkụ, ìhè, ọkụ eletrik ma ọ bụ ihe ndị na-eguzogide mmiri bụ nke eriri, dị ka carbon eriri, iko eriri, ultra-elu molekụla ibu polyethylene eriri, aramid eriri, eriri polyimideetcriri PPS, basalt fiber, etc. Ọ bụghị naanị eriri ọrụ ka eji eji akwa na akwa, kamakwa nwere atụmanya sara mbara na mpaghara njem, mwube, nlekọta ahụike, ụgbọ elu na ikuku.
1. Teknụzụ a na-eji eriri fiber rụọ ọrụ pụrụ iche
Imirikiti ụzọ nkwadebe nke eriri arụ ọrụ arụmọrụ bụ mgbanwe anụ ahụ ma ọ bụ kemịkal nke ihe a na-ahụkarị. Thezọ ndị a na-ejikarị gụnyere ịgbanwe ọdịdị nke oghere spinneret, na-agbakwunye ntụ ntụ arụ ọrụ n'ime usoro nkwado, ihe ntinye abuo abuo, graft copolymerization, etc. N'etiti ha, thegbanwe ọdịdị nke oghere spinnere iji mee ka akụkụ eriri eriri bụ usoro a na-ejikarị.
Eserese nke nhazi nke eriri
N'usoro nke omume mmepụta, COOLMAX® eriri polyester nke INVISTA (INVISTA) ekewa n’ime "iri" udi na nke ohuru "c-o" udi etolitewo na ogbo mbu. Aerocool fiber nke HYOSUNG nke South Korea mepụtara dị ka akwụkwọ anọ "alfalfa", ya na ọmarịcha mmịpụta mmiri na ọsụsọ. A na-eji eriri perepe micro emepụtara site na TEIJIN ka ejiri eriri ma nwee oghere na akụkụ oghere n'akụkụ akụkụ nke eriri ahụ.. O nwere ọrụ nke ịmịcha ọsụsọ n'ime akụkụ oghere maka ịchekwa ma ọ bụ wepụta ọsụsọ echekwara n'ime ahụ. Inweida THERMOLITE® polyester oghere oghere, na-e productionomi mmeputa ajị polar, ezigbo mgbochi mkpuchi arụmọrụ, adabara ịkpụ akwa uwe elu, Ugwu ugwu na ndi ozo. Mmepe n'ime ụlọ nwere ihe ịga nke ọma na mmepụta nke eriri profiled ngalaba dịkwa ọtụtụ, tinyere quanzhou Haitian weputara Cooldry® mmịpụta mmiri na mmiri ọsụsọ, emezheng kemịkal nke fiber nke mmiri Coolbst na-eduzi ngwa ngwa ngwa ngwa akọrọ, Taiwan zhongxing zụlitere mmiri mmiri Coolplus na ọsụsọ ọsụsọ, Taiwan haojie weputara nnabata mmiri Technofine na ọsụsọ draya polyester.
2. Lendgwakọta teknụzụ silk
Site na itinye mgbakwunye ọrụ, ntụ ntụ na reagents n'ime usoro nkwado, Enwere ike ịkwadebe ngwa ọhụrụ eji arụ ọrụ nwere ọrụ na-adịgide adịgide site na ngwakọta. Iwere ezigbo ulo oru dika ihe omuma, ejiri ya mee ihe ebe niile iji meziwanye onwu, antibacterial, nguzogide mmiri na nguzogide UV nke eriri polyester, eriri polyamide ma na - emeghari eriri cellulose.
Ihe ndị a na-ejikarị fiber masterbatch ngwaahịa
N'ihe banyere ntinye nke teknụzụ silk agwakọtara, mgbe mgbochi nje na deodorization nke eriri dị iche iche, Ọgwụ ndị na-egbu nje dị ka zinc oxide, chloride ọla ọcha, nitrate ọla ọcha, ọla kọpa, iko chloride, Enwere ike ịgbakwunye sulfate ọla kọpa na ụmụ irighiri mmiri ndị ọzọ na ntanetị site na iji teknụzụ nano iji mepụta eriri nje. A gbakwụnyekwara ọta nchekwa n’ime oghere nkwado, dika nanoscale titanium dioxide, ndu monoxide, zinc oxide, sịlịkọn dioxide, ogwugwu, iron oxide, manganese borate, alumini silicate, wdg, na eriri UV-proof njikere nwere njiri mara ịta ultraviolet ray site na iji ife efe nke 200-400nm. Ọkpụkpọ ọkụ halogen anaghị akwụ ụgwọ dịka poly (p-phenylsulfone) eyl ihe atụ, A na-etinye cyclic phosphate ester na organosilicone n'ime agbaze agbaze ma ọ bụ ihe ga-agbanwe ịgbanyụ ọkụ flabs nke polypropylene fiber., eriri polyacrylonitrile na eriri polyester. Site na iwebata gi nanoparticles graphene n’ime polymer fiber matrix dika viscose, polyamide, polyacrylonitrile na mmanya mmanya polyvinyl, Enwere ike mepụta eriri graphene / polymer iji meziwanye ike, nguzogide okpomoku, mgbochi ultraviolet, Ngwongwo ogwu na ogwu nke ihe-agha nke eriri polymer. Ngwaahịa ndị bụ isi bụ mica fiber, jed eriri, osikapa na eriri ọka, seramiiki, taiji Stone fiber na ndi ozo. Na mgbakwunye, site na teknụzụ mgbakwunye microcapsule, a na - agbakwunye microcapsule nwere ihe na-arụ ọrụ na mmiri mmiri na-agbagharị n'oge usoro nkwado nke eriri kemịkal, nke nwere ike ịkwadebe eriri aromatic, ọkụ na-eme ka gburugburu ebe obibi dị ọkụ, nhazi nke okpomoku a na - agbanwe agbanwe, eriri na-agbanwe agbanwe na ihe ndị ọzọ.
3. Ngwunye ọgwụ eji eme ihe
Ninggba bọọlụ, na nke polymer abụọ ma ọ bụ karịa ma ọ bụ otu ihe nwere otu ihe dị iche iche na-agakọ n'otu eriri site na otu, chọrọ ngwa ọrụ nhazi ọzọ. Ihe mejupụtara akwara, dika udiri ozo, coredị isi na ụdị agwaetiti, enwere ike inweta ya na ngalaba obe a. Ihe mejupụtara akụnụba nwere ike ọ bụghị naanị dozie ahihia na-adịgide adịgide na ịgbado ọkụ nke eriri ahụ, ma nyekwa njiri mara nke nhicha dị mfe, ire ọkụ retardant, Mkpuchi antistatic na mmiri dị elu site na mkpuchi na-aga n'ihu nke ọtụtụ ihe mejupụtara. Dị ka shei bicomponent PTT na T400 invista ụlọ ọrụ na-agbanwe eriri niile site na PET na PTT compound na-agagharị na, ụdị yarn abụọ nwere njiri mara ụzọ atọ dị mma na mpụta nke ọma, wee dozie ihe isi ike nke ịchafụ ụcha, na-agbanwe oke, enweghi ike ikpuchi isi ya, na akwa akwa na spandex ịka nká na usoro iji, na ọtụtụ okwu ndị ọzọ; Ọkụ na-ere ọkụ na-ere ọkụ site na ngwakọta na-agwakọta na ngwakọta ma ọ bụ copolymer na-ere ọkụ dị elu dị ka isi na polymer dị elu dị ka anụ ahụ nwere ike isi zere mgbaze na njigide ọkụ na-adịghị mma nke eriri ọkụ na-ere ọkụ ma melite nkwụsi ike nke arụmọrụ nke ire ọkụ na arụmọrụ ya.. Na ala agbaze ebe metal ma ọ bụ alloy dị ka isi oyi akwa na PET dị ka cortex, A na - etolite ụdị ihe eji eme ihe ọhụrụ na - emegide radieshon, nke na - edozi nsogbu nke ịchekwa eriri mkpuchi dị na - adị mfe iji kemịkalụ arụ ọrụ, ọ dịghị mfe iji dai na adịghị mma aka.
4. Graft copolymerization mgbanwe teknụzụ
Usoro a bụ maka mgbanwe kemịkal nke eriri, na usoro mmepụta ya dị ogologo ma ọnụ ahịa mmepụta dị elu. Copolymerization bụ polymerization nke ndị ahịa abụọ ma ọ bụ karịa n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. Grafting bụ usoro kemịkalị nke enwere ike itinye nnukwu eriri olu nke eriri ahụ na otu achọrọ. Ọ bụrụ na radiesị grafting ma ọ bụ chemical grafting usoro na-nakweere, A na-eji ogige mmeghachi omume nwere phosphorus na halogen maka mgbanwe ngwa ngwa nke polyester, mmanya polyvinyl na eriri ndị ọzọ, nke nwere ezigbo anwu. Site na grafting copolymerization, otu hydrophilic dika hydroxyl otu, otu ụgbọ ala nchara, Amalitere amide otu na amino group n’ime macromolekụl nke eriri ahụ, nke nwere ike imezi hygroscopic, Ọsụsọ na ihe antistatic nke eriri. Ọ bụ usoro nhazi dị ọcha nke eji eme ka eriri gbanwee site na mbido elu ya na njiri ike, ọkụ ultraviolet siri ike ma ọ bụ radieshon laser ma ọ bụ plasma dị ala.
Maka ama ndi ozo, biko toaa ntị na akụkọ banyere mmepe ngwa ahịa China 2019.
(isi mmalite: texti ndu osise micro)
Nyocha miri emi nke akwa uwe ndị nwanyị n’ile n’iyi ejiji dị n’usoro nka na ụzụ
Ihe eji eme akwa ulo bu uzo mmepe ato